အောင်လအန်ဆန်းကှိုဆွဲလှဲပြီး လှုပ်မရအောင် ချုပ်ပြီး အနိုင်ယူကာ ချန်ပီယံ ခါပတ်ကို သိမ်းပိုက် သွားမယ်လို့ ဒီရစ်ဒါက ထပ်မံ ကြုံးဝါးလိုက်ပြန်ပြီ – Shwe Ba
Homepage / Local News / အောင်လအန်ဆန်းကှိုဆွဲလှဲပြီး လှုပ်မရအောင် ချုပ်ပြီး အနိုင်ယူကာ ချန်ပီယံ ခါပတ်ကို သိမ်းပိုက် သွားမယ်လို့ ဒီရစ်ဒါက ထပ်မံ ကြုံးဝါးလိုက်ပြန်ပြီ
အောင်လအန်ဆန်းကှိုဆွဲလှဲပြီး လှုပ်မရအောင် ချုပ်ပြီး အနိုင်ယူကာ ချန်ပီယံ ခါပတ်ကို သိမ်းပိုက် သွားမယ်လို့ ဒီရစ်ဒါက ထပ်မံ ကြုံးဝါးလိုက်ပြန်ပြီ
ဒီရစ်ဒါ က တော့ အောင်လအန်ဆန် ကို ဆွဲလှဲပြီး လှုပ်မရ အောင်ချုပ်ပစ် မယ် လို ကြုံးဝါး ပြောဆို လိုက် ပါ တယ် ပြိုင်ပွဲ ဟာ ပိုပြီး အရှိန်တက် လာခဲ့ပါပြီ!အောင်လ အန်ဆန် ကို ဆွဲလှဲပြီး လှုပ်မရ အောင်ချုပ်ပစ် မယ် လို့ ဒီရစ်ဒါကြုံးဝါး လိုက်ပါ တယ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက် နေ့၊ စင်ကာပူမှာ ထိုးသတ် မယ့် မစ်ဒယ် ဝိတ်တန်း လက်ရှိ ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန် နဲ့ ပွဲမတိုင် ခင် မှာ စိန်ခေါ် သူ ဒီရစ်ဒါ ရဲ့ ပြော စကားတွေကြောင့် သူတို့ တွဲဆိုင်း က ပိုပြီး အရှိန် တက်လာ ခဲ့ ပြီဖြစ် ပါ တယ် ။ ရှုံးပွဲ လုံးဝ မရှိသေး ဘဲ (၁၂) ပွဲဆက် တိုက် အနိုင် ရရှိ ထား တဲ့ ဒီရစ်ဒါနဲ့ ဝိတ်တန်းနှစ်ခု ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန် တို့ က ONE: INSIDE THE MATRIX မှာ အဓိ က တွဲဆိုင်း အဖြစ်နဲ့ ထိုးသတ်ကြ တော့မှာပါ။“ဒီလိုပွဲ ကို ထိုးသတ် နိုင်ဖို့ ကျွန်တော့် ဘဝတစ်လျှောက် လုံး လုပ်ခဲ့ ရတာပါ။ အသက် (၅) နှစ် အရွယ် ကတည်းက ကြမ်း ပြင် ( ထိုးသတ် တဲ့နေရာ ကြမ်းပြင် ကို ဆိုလို )ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ရှိနေခဲ့ တာ ပါ ။
အခုချိန် က တော့ ကျွန်တော် သရဖူဆောင်းရ တော့မယ့် အချိန်ပါပဲ” လို့ ဒီရစ်ဒါ က ONE Championshipနဲ့ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ပြောခဲ့ ပါတယ်။အသက် (၃၀) အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ နယ်သာလန် ဖိုက်တာ ဟာ ဂျူဒိုခါးပတ်နက် အဆင့်ရရှိ ထားပြီး ဘရာဇီးလ် ဂျူဂျစ်ဆုကို လည်း ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် တတ်မြောက် ထားသူဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၃ခုနှစ် မှာ MMA လောကထဲ ကို စတင်ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန် ထိ ၁၂ပွဲထိုး သတ်ထားရာ မှာပွဲတိုင်းကို အနိုင်ရရှိ ထားခဲ့ပြီးအောင်လ အန်ဆန် နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲက သူ့အတွက် အကြီးမားဆုံး စမ်းသပ် မှုနဲ့ စိန်ခေါ်မှုဖြစ် လာတော့မှာပါ။“အောင်လအန်ဆန် မှာ ထူးခြားကောင်းမွန် တဲ့ ညာလက်သီးထိုး ချက်တွေ၊ ညာခြေကန်ချက်ေ တွ ရှိပါ တယ်။ သူက အလှည့်အပြောင်းလည်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးဒတ်ခ်ျကစ်ဘောင်ဆင်ပုံစံနဲ့လည်း ထိုးသတ်နိုင်ပါတယ်.. လက်သီးပါဝါပြင်းပြီး ပြိုင်ဘက် ကို ဖိအားပေးနိုင်သူဖြစ်လို့ သူ့ဆီမှာ အရည်အသွေးအားလုံးအကုန်ရှိနေတာပါ။
ပြီးတော့ သူ က နပမ်းကောင်းကောင်းတတ်သူဆိုတာ ကို မေ့ထား လို့ လည်း မရပါဘူး၊ ground ပိုင်း ကောင်းမွန် ပြီး တကယ့် ဖိုက်တာကောင်း ပါ ” “သူ့ကို ကျွန်တော် ကြမ်းပြင်ပေါ် လှဲချပြီးတော့ မလှုပ်နိုင်ေ အာင် ချုပ်သွား မှာပါ၊ သူ က ရင်ဆိုင်ရ အရမ်းခက်သူ လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ ကို အလဲထိုးဖို့ ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်သ လောက်ပဲ .. ဒါပေမယ့်..လူတိုင်း မှာ လည်ပင်း တစ်ခုတော့ ရှိ တာပါပဲ.. ဘယ်လိုနေရာမျိုးဖြစ်ဖြစ် လည်ပင်း ကို မရ ရအောင် ကျွန်တော် ချုပ် နိုင် ပါ တယ် ” လို့ ဒီရစ်ဒါ က ထပ်ပြော သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မြန်မာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ သည်းခြေ ကြိုက် ဖိုက်တာ အောင်လအန်ဆန် က တော့ (၇) ပွဲ ဆက်တိုက် အနိုင် ရရှိထား ပြီး မစ်ဒယ် ဝိတ်တန်း နဲ့ လိုက်ဟဲ ဗီးဝိတ် တန်းချန်ပီယံ အဖြစ် ရပ်တည်နေ သူ ဖြစ် ပါ တယ် ။
သူ အနိုင်ရရှိ ခဲ့တဲ့ သူတွေ ထဲ မှာ မွေထိုင်းချန်ပီယံလေးကြိမ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ကစ်ဘောက်ဆင်ချန်ပီယံ အလိန်းဂါလာနီ၊ဟဲဗီးဝိတ်တန်းကနေ လိုက်ဟဲဗီး ဝိတ်တန်း ကို ဆင်းထိုး ခဲ့တဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာ တို့ ပါဝင် ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းမှာ .. ဂျပန်ဖိုက် တာ ကမ်ဟဆဲဂါဝကို အနိုင်ယူ ကာ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ခါးပတ် ကို ကာကွယ် ခဲ့ ပြီး လက်ရှိ အချိန် ထိ (၃) ကြိမ် ဆက် တိုက် ကာကွယ် ထားနိုင် ခဲ့ ပြီး ဖြ စ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် ကြီးရေ နယ်သာလ န်ဖိုက် တာ ဒီရေဒါ က တော့ အောင်လအန်ဆန်း ကို အပိုင် ဖမ်းချုပ် လှဲသိပ် ကာ အနိုင် ယူ မယ် လို့ အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆို လာခဲ့ တာပါနော် ။ဒီယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ် ပွဲ မှာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်းသာလျှင် အနိုင်ရမယ် လို့ ယုံကြည်ချက် အ ပြည့် ရှိ ကြ မ ယ် လို့ မြန်မာ ပရိသတ်ကြီး က ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိ သလို မြန်မာစပါး ကြီးမြွေ အောင်လအန်ဆန်း ကလည်း ရွှေခါး ပတ်ချန်ပီယံ ဘွဲ့ထူး ကို ကာကွယ် ပြီး ဂုဏ် ယူ စရာ နောက် ထပ် အောင်ပွဲ တစ်ခုကို ရယူပေး လာဖို့ အဆင် သင့်ဖြစ်နေ ပါပြီနော် ။ အောင်လအန်ဆန်းအတွက် ခွန်အားဖြည့် ဝန်းရံအားပေးစကားတွေ၊ ရဲရဲတောက် စကားတွေ ပြောကြားပေးခဲ့ကြပါအုံးေ နာ်။ အားပေးတဲ့ ပရိသတ် ရဲ့ တက်ကြွစွာဝန်းရံသံဟာ အောင်လ အတွက် ကြီးမားလှသော ခွန်အားပါပဲနော် ။
crd : SHWE THADIN
ဒီရဈဒါ က တော့ အောငျလအနျဆနျ ကို ဆှဲလှဲပွီး လှုပျမရ အောငျခြုပျပဈ မယျ လို ကွုံးဝါး ပွောဆို လိုကျ ပါ တယျ ပွိုငျပှဲ ဟာ ပိုပွီး အရှိနျတကျ လာခဲ့ပါပွီ!အောငျလ အနျဆနျ ကို ဆှဲလှဲပွီး လှုပျမရ အောငျခြုပျပဈ မယျ လို့ ဒီရဈဒါကွုံးဝါး လိုကျပါ တယျ အောကျတိုဘာလ ၃ဝရကျ နေ့၊ စငျကာပူမှာ ထိုးသတျ မယျ့ မဈဒယျ ဝိတျတနျး လကျရှိ ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျ နဲ့ ပှဲမတိုငျ ခငျ မှာ စိနျချေါ သူ ဒီရဈဒါ ရဲ့ ပွော စကားတှကွေောငျ့ သူတို့ တှဲဆိုငျး က ပိုပွီး အရှိနျ တကျလာ ခဲ့ ပွီဖွဈ ပါ တယျ ။ ရှုံးပှဲ လုံးဝ မရှိသေး ဘဲ (၁၂) ပှဲဆကျ တိုကျ အနိုငျ ရရှိ ထား တဲ့ ဒီရဈဒါနဲ့ ဝိတျတနျးနှဈခု ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျ တို့ က ONE: INSIDE THE MATRIX မှာ အဓိ က တှဲဆိုငျး အဖွဈနဲ့ ထိုးသတျကွ တော့မှာပါ။“ဒီလိုပှဲ ကို ထိုးသတျ နိုငျဖို့ ကြှနျတေျာ့ ဘဝတဈလြှောကျ လုံး လုပျခဲ့ ရတာပါ။ အသကျ (၅) နှဈ အရှယျ ကတညျးက ကွမျး ပွငျ ( ထိုးသတျ တဲ့နရော ကွမျးပွငျ ကို ဆိုလို )ပျေါမှာ ကြှနျတျော ရှိနခေဲ့ တာ ပါ ။
အခုခြိနျ က တော့ ကြှနျတျော သရဖူဆောငျးရ တော့မယျ့ အခြိနျပါပဲ” လို့ ဒီရဈဒါ က ONE Championshipနဲ့ ပွုလုပျ ခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူး မှာ ပွောခဲ့ ပါတယျ။အသကျ (၃၀) အရှယျသာ ရှိသေးတဲ့ နယျသာလနျ ဖိုကျတာ ဟာ ဂြူဒိုခါးပတျနကျ အဆငျ့ရရှိ ထားပွီး ဘရာဇီးလျ ဂြူဂဈြဆုကို လညျး ကြှမျးကြှမျး ကငျြကငျြ တတျမွောကျ ထားသူဖွဈပါတယျ။၂၀၁၃ခုနှဈ မှာ MMA လောကထဲ ကို စတငျဝငျရောကျ ခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျ ထိ ၁၂ပှဲထိုး သတျထားရာ မှာပှဲတိုငျးကို အနိုငျရရှိ ထားခဲ့ပွီးအောငျလ အနျဆနျ နဲ့ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲက သူ့အတှကျ အကွီးမားဆုံး စမျးသပျ မှုနဲ့ စိနျချေါမှုဖွဈ လာတော့မှာပါ။“အောငျလအနျဆနျ မှာ ထူးခွားကောငျးမှနျ တဲ့ ညာလကျသီးထိုး ခကျြတှေ၊ ညာခွကေနျခကျြေ တှ ရှိပါ တယျ။ သူက အလှညျ့အပွောငျးလညျး ပွုလုပျနိုငျစှမျးရှိပွီးဒတျချကြဈဘောငျဆငျပုံစံနဲ့လညျး ထိုးသတျနိုငျပါတယျ.. လကျသီးပါဝါပွငျးပွီး ပွိုငျဘကျ ကို ဖိအားပေးနိုငျသူဖွဈလို့ သူ့ဆီမှာ အရညျအသှေးအားလုံးအကုနျရှိနတောပါ။
ပွီးတော့ သူ က နပမျးကောငျးကောငျးတတျသူဆိုတာ ကို မထေ့ား လို့ လညျး မရပါဘူး၊ ground ပိုငျး ကောငျးမှနျ ပွီး တကယျ့ ဖိုကျတာကောငျး ပါ ” “သူ့ကို ကြှနျတျော ကွမျးပွငျပျေါ လှဲခပြွီးတော့ မလှုပျနိုငျေ အာငျ ခြုပျသှား မှာပါ၊ သူ က ရငျဆိုငျရ အရမျးခကျသူ လညျးဖွဈပါတယျ ။ သူ့ ကို အလဲထိုးဖို့ ဆိုတာက မဖွဈနိုငျသ လောကျပဲ .. ဒါပမေယျ့..လူတိုငျး မှာ လညျပငျး တဈခုတော့ ရှိ တာပါပဲ.. ဘယျလိုနရောမြိုးဖွဈဖွဈ လညျပငျး ကို မရ ရအောငျ ကြှနျတျော ခြုပျ နိုငျ ပါ တယျ ” လို့ ဒီရဈဒါ က ထပျပွော သှားခဲ့ ပါတယျ ။ မွနျမာ ပရိသတျတှေ ရဲ့ သညျးခွေ ကွိုကျ ဖိုကျတာ အောငျလအနျဆနျ က တော့ (၇) ပှဲ ဆကျတိုကျ အနိုငျ ရရှိထား ပွီး မဈဒယျ ဝိတျတနျး နဲ့ လိုကျဟဲ ဗီးဝိတျ တနျးခနျြပီယံ အဖွဈ ရပျတညျနေ သူ ဖွဈ ပါ တယျ ။
သူ အနိုငျရရှိ ခဲ့တဲ့ သူတှေ ထဲ မှာ မှထေိုငျးခနျြပီယံလေးကွိမျ နဲ့ ကမ်ဘာ့ကဈဘောကျဆငျခနျြပီယံ အလိနျးဂါလာနီ၊ဟဲဗီးဝိတျတနျးကနေ လိုကျဟဲဗီး ဝိတျတနျး ကို ဆငျးထိုး ခဲ့တဲ့ ဘရနျဒနျဗီရာ တို့ ပါဝငျ ခဲ့ပွီး ၂၀၁၉ခုနှဈ မတျလ အတှငျးမှာ .. ဂပြနျဖိုကျ တာ ကမျဟဆဲဂါဝကို အနိုငျယူ ကာ မဈဒယျဝိတျတနျး ခါးပတျ ကို ကာကှယျ ခဲ့ ပွီး လကျရှိ အခြိနျ ထိ (၃) ကွိမျ ဆကျ တိုကျ ကာကှယျ ထားနိုငျ ခဲ့ ပွီး ဖွ ဈပါ တယျ ။ ပရိသတျ ကွီးရေ နယျသာလ နျဖိုကျ တာ ဒီရဒေါ က တော့ အောငျလအနျဆနျး ကို အပိုငျ ဖမျးခြုပျ လှဲသိပျ ကာ အနိုငျ ယူ မယျ လို့ အထကျပါ အတိုငျး ပွောဆို လာခဲ့ တာပါနျော ။ဒီယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျ ပှဲ မှာ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ အောငျလအနျဆနျးသာလြှငျ အနိုငျရမယျ လို့ ယုံကွညျခကျြ အ ပွညျ့ ရှိ ကွ မ ယျ လို့ မွနျမာ ပရိသတျကွီး က ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိ သလို မွနျမာစပါး ကွီးမွှေ အောငျလအနျဆနျး ကလညျး ရှခေါး ပတျခနျြပီယံ ဘှဲ့ထူး ကို ကာကှယျ ပွီး ဂုဏျ ယူ စရာ နောကျ ထပျ အောငျပှဲ တဈခုကို ရယူပေး လာဖို့ အဆငျ သငျ့ဖွဈနေ ပါပွီနျော ။ အောငျလအနျဆနျးအတှကျ ခှနျအားဖွညျ့ ဝနျးရံအားပေးစကားတှေ၊ ရဲရဲတောကျ စကားတှေ ပွောကွားပေးခဲ့ကွပါအုံးေ နျာ။ အားပေးတဲ့ ပရိသတျ ရဲ့ တကျကွှစှာဝနျးရံသံဟာ အောငျလ အတှကျ ကွီးမားလှသော ခှနျအားပါပဲနျော ။
(၅-၁-၂၀၂၁) နမှေ့ာ YGN KTV ကိုဝငျရောကျဖမျးဆီးရာ မနျနဂြောအပါအဝငျ စုစုပေါငျး ၈၂ ဦးကိုဖမျးမိ
New Year(နှဈသဈကူး)တှငျ ရနျကုနျမွို့ရှိ အငျးယားကနျအပါအဝငျ နရောသုံးခုကို ကိုဗဈစညျးမဉျြးနဲ့အညီ ဖှငျ့ပေးမယျတဲ့ …
ပြင်းထန်လာတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ ဒေ့ဗ် တို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က အပြန်အလှန် စကားထိုးစစ်ဆင်မှု
Previous post FIGHTING U KYAW THU ! FIGHTING TUN KO KO ! ဟု သူတို့ ရဲ့ PPE ဝတ်စုံ တွေ ပေါ်မှာ ရေးထိုး ပြီး အားပေး ခဲ့ တဲ့ ဆရာဝန် များ
Next post အိပ်ယာပေါ် မှာ လန် ထွက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ သဇင်ဦး ( ရုပ်သံ )